एक वर्षमा कुन बैंकको कति निक्षेप र कर्जा प्रवाह ?(सूचीसहित) ~ Banking Khabar
एक वर्षमा कुन बैंकको कति निक्षेप र कर्जा प्रवाह ?(सूचीसहित)
बैंकिङ खबर/कोरोना महामारीकाबीच पनि वाणिज्य बैंकहरुले कर्जा प्रवाहका साथै निक्षेप संकलन बढाएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुले ४२ खर्ब १ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको नेपाल बैंकर संघले जनाएको छ । जुन आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को असार मसान्त सम्ममा बैंकहरुले ३४ खर्ब ८७ अर्ब निक्षेप संकलन गरेका थिए भने २९ खर्ब ३ अर्ब कर्जा परिचालन गरेका थिए ।
एक वर्षको अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप संकलन भन्दा एक खर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरेका हुन् । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा वाणिज्य बैंकहरुमा ७ खर्ब १४ अर्ब निक्षेप थपिएको छ । सोही अवधिमा बैंकहरुको कर्जा परिचालन ८ खर्ब १८ अर्बले बढेको छ । गत आवमा बैंकहरुमा असोज, चैत र असारमा निक्षेप उच्चदरले बढे्को देखिन्छ भने असोज, पुुस, चैत र असारमै कर्जा प्रवाह बढेको छ ।
निक्षेप संकलन र कर्जा विस्तारमा एनआईसी एशिया थप आक्रामक देखिएको छ । मर्ज भएर ठुला बनिरहेका बैंकहरुलाई पनि उछिन्दै निक्षेप र कर्जा लगानी दुबैमा एनआईसी एशिया पहिलो हुन सफल भएको छ ।
एनआईसी एशियाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ८९ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउनुका साथै ९१ अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले तीन खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ ।
एनआईसी एशियालाई ग्लोबल आइएमई बैंकले पछ्याइरहेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकले ५६ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउदा ४२ अर्बले मात्रै कर्जा विस्तार गर्न सकेको छ । बैंकले दुई खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि २ खर्ब ४२ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ ।
नविल बैंकले यस वर्ष ३४ अर्बले निक्षेप बढाउँदा ५२ अर्बले कर्जा विस्तार गर्न सफल भएको छ । यस अवधिमा बैंकले २ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि २ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ कर्जा विस्तार गरेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रभु बैंकले ३३ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउँदा ३९ अर्ब कर्जा विस्तार गर्न सफल भएको छ । बैंकले एक खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि १ खर्ब ४२ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ ।
कर्जा विस्तारमा सबैभन्दा कमजोर नेपाल एसबिआई बैंक देखिएको छ । एसबिआईले ७ अर्बले मात्रै कर्जा विस्तार गर्न सकेको छ । यस अवधिमा निक्षेप पनि ४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुमारी बैंकले ३२ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउँदा २८ अर्ब कर्जा विस्तार गर्न सफल भएको छ । बैंकले एक खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि १ खर्ब ४३ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ ।
कृषि विकास बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा १९ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउनुका साथै २८ अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले एक खर्ब ६२ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी एक खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ ।
लक्ष्मी बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउनुका साथै १७ अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी एक खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ ।
बैंक अफ काठमाडौंले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ११ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउनुका साथै १६ अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले ९७ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ९८ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ ।
सेन्चुरी बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २६ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउनुका साथै २० अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले ९७ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ८१ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ ।
सिटिजन बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ५० अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउनुका साथै ४२ अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले ९७ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ८१ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ ।
सिभिल बैंकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३० अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउनुका साथै २९ अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले ९० अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ८३ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ ।
नेपाल बैंक लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २० अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउनुका साथै ३७ अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले १ खर्ब ६३ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ ।
सनराइज बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउनुका साथै १९ अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले एक खर्ब १० अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ ।
सानीमा बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २० अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउनुका साथै २९ अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले एक खर्ब ३० अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ ।
हिमालयन बैंकले १७ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउँदा २४ अर्बले मात्रै कर्जा विस्तार गर्न सकेको छ । बैंकले एक खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि १ खर्ब ३२ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ ।
एभरेष्ट बैंकले १६ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउँदा १६ अर्बले नै कर्जा विस्तार गर्न सकेको छ । बैंकले एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि १ खर्ब ३४ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले ३१ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउँदा ४३ अर्बले कर्जा विस्तार गर्न सकेको छ । बैंकले दुई खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि १ खर्ब ९९ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ ।
प्राइम बैंकले २९ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउँदा २८ अर्बले कर्जा विस्तार गर्न सकेको छ । बैंकले एक खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि १ खर्ब ४२ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ ।
एनसीसी बैंकले ३१ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउँदा ३० अर्बले कर्जा विस्तार गर्न सकेको छ । बैंकले एक खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि ९९ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ ।
एन एम बी बैंक
एनएमवी बैंकले ३१ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउँदा ३६ अर्बले कर्जा विस्तार गर्न सकेको छ । बैंकले एक खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि १ खर्ब ५८ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ ।
सिद्धार्थ बैंकले ३९ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउँदा ३८ अर्बले कर्जा विस्तार गर्न सकेको छ । बैंकले एक खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि १ खर्ब ६५ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ ।
मेघा बैंकले १३ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउँदा २७ अर्बले कर्जा विस्तार गर्न सकेको छ । बैंकले एक खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरि १ खर्ब ४१ अर्ब कर्जा विस्तार गरेको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २७ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउनुका साथै २१ अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले एक खर्ब ३४ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १६ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप बढाउनुका साथै ९ अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले ८९ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ७१ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंक
स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम निक्षेप बढाएको छ भने १४ अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले ९६ अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ७२ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ ।
एनसीसी बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ३१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम निक्षेप बढाएको छ भने ३० अर्बले कर्जा विस्तार गरेको छ । बैंकले १ खर्ब १० अर्व रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ९९ अर्ब रुपैयाँले कर्जा विस्तार गरेको छ ।
हेर्नुस् अन्तर दर कुन बैंककाे कति ?